SAWIRRO XUL AH: Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladda Muqdisho – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladda Muqdisho
jilacow April 18, 2017
(Muqdisho) 17 Abriil 2017. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika Axmed Axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo ay si weyn u soo dhaweyn masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan doowlada iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Hoggaamiyaha u dhashay dalka Madagascar ayaa casuumaad ka helay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane C/qani Saciid Carab,kaasoo ah shaqsi ay ka go’an tahay hor marinta Isboortiga.
Markii uu kasoo degtay garoonka aadan Cadde waxa uu booqasho ku tagay garoomada Jaamacadaha, Muqdisho iyo Koonis inkastoo tuulada Sportiga aysan wali ku jirin gacanta xiriirka.
Markii ay tageen garoonka Banaadir aye si wada jir ah saxaafadda ula hadlaan waxaana hadalka billabay C/qani Saciid Carab oo ah guddoomiyaha xiriirka soomaliyeed ee kubadda cagta waxa uuna sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay in maanta ay soo dhaweeyaan madaxweyne Axmed.
Sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga: Khadiijo Maxamed Diiriye oo qeyb ka aheyd wafdigii soo dhaweeyay Axmed ayaa Iyana sheegtay in ay ka rajeyneyso madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika in uu ka shaqeeyo sidii Soomaaliya ay u tagi laheyd heerkii ay ka joogtay kubadda cagta.
Ugu dambeyn Axmed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay booqashada uu ku yimid soomaaliya, waxa uuna carabka ku dhuftay in waqtiga ugu badan uu ku bixin doono sidii ay u soo laaban la heyd awooddii Soomaaliya ee dhanka kubadda cagta.
SAWIRRO: Xiddigaha Bayern Munich oo u soo duulay Spain ka hor kulankooda habeen dambe ee Real Madrid
Safka laga yaabo inay Bayern Munich ku soo gasho kulanka habeen dambe ee Real Madrid